न्याय परिषदको विकल्प के हुन सक्छ?::Online News Portal from State No. 4
स्याङजा पुतलीबजार– ४ का मीनबहादुर बोहोरा भारतीय पूर्वसैनिक हुन् । पेन्सन आएपछि उनी नयाँ कामको खोजीमा थिए ।काम खोज्नेक्रममा उनका आँखा स्याङजाकै स्थानीय पत्रिकामा छापिएको बिज्ञापनमा प¥यो । मकाउमा वैदेशिक रोजगारीका लागि राम्रो तलव सुबिधासहितको बिवरण थियो, बिज्ञापनमा । लाहुरे मान्छे, काम सेक्यूरिटीगार्ड ! ‘पैसा पनि राम्रै रहेछ जाने योजना बनाएँ’, उनले भने,‘अनि मैले त्यो बिज्ञापनमा दिइएको सम्पर्क ब्यक्तिलाई फोन गरेँ ।
बिज्ञापनमा रमन दाहालको नामसँगै सम्पर्क नम्बर थियो । कुन कम्पनीबाट विदेश लैजाने हो भन्ने सोध्दा रमनले वल्डवाईड म्यानपावर कम्पनीको नाम लिए । यति भए पछि भेट्ने योजना भयो र भेट पनि भयो । मीनबहादुरले ०७३ मंसिर ३० गते मकाउ जानका लागि पुरानो बानेश्वरस्थित शाही मिलन मेडीकल लाउन्जमा ३ हजार रुपैयाम् खर्च गरेर मेडीकल टेस्ट गराए । ०७३ पुस ३ गते पोखरा आएर प्राईम बैंकबाट १ लाख ५० हजार रुपैयाँ रमनको खातामा जम्मा गरिदिए । नागरिकता र पासपोर्ट पहिला नै बुझाई सकेका थिए । १०÷१५ दिनपछि भिषा आउँछ भनेका रमन त्यसपछि सम्पर्कमा आउन छाडे । दिन,महिना गन्दै जाँदा डेढ वर्ष बित्यो । न मान्छेको ठेगान छ न भिषाको नै । यता, मीनबहादुर भने मान्छे खोज्दा खोज्दै हैरान ! सम्पर्कका लागि उनी वल्डवाईड कम्पनी गए तर कम्पनी हाम्रो मान्छे होइन भन्दै तर्कियो । अहिले मीनबहादुर ठगिएको पैसा उठाउन यता र उता भौँतारिइरहेका छन् ।
‘सबै ठिकै थियो, पत्रिकामा बिज्ञापन पनि छापिए कै हो, कम्पनीमार्फत नै जान खोजेको हो तर ठगिएँ’, उनले भने,‘ कस्को विश्वास गर्ने कस्को नगर्ने ?’ जसरी संचारमाध्यममा आएका समाचारहरुलाई सर्वसाधारणले आधिकारिक मान्ने प्रबृति देखिएको छ,त्यसैगरी पत्रपत्रिकामा छापिएको बिज्ञापनले, कम्पनी आधिकारिक नै होला भन्ने भान आम नागरिकमा पर्ने गरेको छ । तर, संचार माध्यममा छापिने बिज्ञापन आधिकारिक म्यानपावर कै होला भनेर भ्रममा पर्ने गरेको वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरु बताउँछन् । संचारमाध्यमले बिज्ञापन छाप्दा आधिकारिता जाँच्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बाह्रबिसे न.पा. वडा नं ६ घर भई भक्तपुर दूधपोखरी बस्ने रमन दाहाल अहिले कता छन् मिनबहादुरले पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । व्यक्ति फेला नपरी मुद्दा दायर गर्नुको औचित्य नहुने मीनबहादुर बताउँछन् । पोखरा सराङकोटका नरबहादुर, प्रकाश र भक्त पनि पत्रिकामा छापिएको बिज्ञापन देखेर लोभिएका थिए । वर्किङ भिषामा क्यानडा जान पाइने बिज्ञापन देखेरै उनीहरुले सम्पर्क ब्यक्तिलाई फोन गरे । सम्पर्क व्यक्ति सूर्यबहादुर खड्का आफन्त नै रहेछन् । प्रकाश, भक्त र नरबहादुर खड्कालाई वर्किङ भिषामा क्यानडा लैजान्छु भनेर प्रतिब्यक्ति २८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ त लिए तर क्यानडा पठाइदिएनन् ।
उनले गतवर्ष माघ २७ गते इन्डियाको बाटोबाट क्यानडा लैजान्छु भनेर तीन जनासँग जनही २८ लाख रुपैयाँ लिएका थिए सूर्यबहादुरका आफ्नै भाई प्रकाश र भक्त जीसीलाई पनि भारतको कोचि भन्ने ठाउँबाट, इन्डोनेशियाको हुदै क्यानडा लैजाने भनिएको थियो । इन्डोनेशियाको बाली पुगेर नरबहादुर र उनका साथीहरु हिस्स परेर फर्किए । सूर्यबहादुर र उनको गिरोह मिलेर क्यानडाको भिषा र वर्क पर्मिट समेत दुरुस्त बनाई झुक्काएका थिए । ‘हामीहरु ढुक्क भएका थियौं जव हाम्रो वर्क पर्मिट र भिषा आयो । हेर्दा दुरुस्तै छ भिषा र वर्क पर्मिट एलआईएमए भन्ने पेपर पनि थियो’, उनीहरुले सुनाए,‘तर सबै नक्कली रहेछ ।’ ठगिएकाहरु प्रकाश, नरबहादुर र भक्त जीसीको भिषा आए पनि पासर्पोट उनीहरुसँग थिएन । सबै कागजात सूर्यबहादुर र उनका गिरोहले मागेर राखेका थिए । हेर्दा दुरुस्तै देखिने वर्क पर्मिट र भिषा तर नक्कली भएको प्रकास र उनका साथीहरुले जब थाहा पाए, तब उनीहरुलाई क्यानडा जानका लागि दिल्ली एयरपोर्टमा अलपत्र पारियो ।
सूर्यबहादुरले ठगि गर्नका लागि ठाउँ ठाँउमा गिरोह राखेका थिए । उनले भारतमा एक भारतीय र ईन्डोनेशियामा डेभिड भन्ने मान्छे मार्फत काम गराउँथे । सूर्यबहादुर खड्काले क्यानडाको स्नोब्रेकर होटलमा कामको सम्झौतापत्र र सो होटलका म्यानेजर नादिर पटेल भन्ने मान्छे मैले चिनेको छु उसँग मैले इमेलमा कुराकानी गरिरहेको छु भने । होटलको नक्कली इमेल र वेवसाइट समेत देखाएर पीडितहरुलाई छक्याएका थिए । ठगिएको थाहा पाए पनि पीडितहरु वैदेशिक रोजगार बिभागमा उजुरी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । पीडितमध्येका नरबहादुरले भने ‘धेरै बेइज्जत ग¥यो भने पैसा फिर्ता नदेला कि भन्ने डर छ । के गर्नु आफ्नै काकाको छोरा हो एकदिन न एकदिन त आउला नि कहा जान्छ र ?’ यसरी पैसा फिर्ता पाउने आसै आसमा बसेका पीडितहरु ।
यी सबै प्रकारका ठगी कार्यमा म्यानपावर कम्पनी र दलालको मिलोमतो रहेको पाइन्छ । म्यानपावर कम्पनीको असक्षमता, दलाहरुको बिगबिगीका कारण बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुले दुःख पाउने गरेका छन् । सबै कारोवार मौखिक रुपमा नै मिलाउने गर्दा धेरै जस्तो ठगीमा उनीहरुबिरुद्ध कारवाही गर्ने आधार फेला पर्न सक्दैन । तर मीनबहादुरसँग भने रमन दाहालको नाउमा बैंक खातामा बुझाएको एकलाख ५० हजार रुपैयाँे स्लिप भने रहेको छ । म्यानपावर कम्पनी र दलालको आपसी मिलोमतोमा बैदेशिक रोजगारीमा हुने गरेको ठगी प्रतिको जिम्मेवार बन्ने ? गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ । म्यानपावर कम्पनीले दलालको जिम्मा लिँदैन तर दलाललाई म्यानपावर कम्पनीले नै चलाई रहेको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जान चाहाने युवाहरुले पनि बुझ्दै नबुझी जो कोही व्यक्ति, दलाल र म्यानपावर कम्पनीको पनि झट्टै बिश्वास नगर्न नै बुद्धिमानी हुने वैदेशिक रोजगारका जानकारहरु बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारमिा सुरक्षित कारोवार गर्न आधिकारिक म्यानपावरमा नै सम्र्क गर्ने र पैसा दिँदा तमसुक बनाउने, बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने जानकारहरुको भनाई छ । असुरक्षित बैदेशिक रोजगारीभन्दा स्वदेश मै सानोतिनो ब्यवसायमा चित्त बुझाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।